Ọ dịghị mfe dị ka ndị na-akwado ya na ndị na-eso ụzọ | Martech Zone
Ntị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi ahịa: ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ abụghị akara ngosi siri ike nke mmetụta. Chọpụta… ọ pụtara ìhè ma dịkwa mfe - mana ọ dịkwa umengwụ. Ọnụ ọgụgụ ndị Fans ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ anaghị enwe njikọ ọ bụla na ikike mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-emetụta ndị ọzọ.
Njirimara asaa nke Mmetụta Ntanetị
Ihe dị mkpa na-etinye aka na ya bụ isi mkparịta ụka dị mkpa. Onye na-eme ihe nkiri nwere ndị bajillion na-eso ụzọ ya apụtaghị na ha nwere ike ịmetụta ndị ọzọ gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Onye na-emetụta ya kwesịrị itinye aka ugboro ugboro na nso nso a na mkparịta ụka banyere isiokwu dị mkpa. Enwere otutu blọọgụ gbahapụrụ, ibe Facebook, na akaụntụ Twitter n'ebe ahụ. Mgbasa mgbasa ozi na-achọ oge, ndị na-akwụsị ma ọ bụ ọbụna kwụsịtụ ntakịrị na-efunahụ ọtụtụ mmetụta na isiokwu.
Onye na-emetụta ya ga-abụrịrị na-ezo aka ugboro ugboro site na ndi ozo na mkparita uka di nkpa. Retweets, backlinks na ikwu okwu bụ ihe na-egosi ikike onye nwere ike itinye aka na ndị na-ege ntị.
Onye na-emetụta ya ga- tinye aka na mkparịta ụka. O zughi ikpochapu ozi nye ndị na-ege ha ntị, onye na-emetụta ya nwere ikike ịza ajụjụ ndị mmadụ, na-eche mmegide ihu, na na-ezo aka ndị isi ndị ọzọ nọ na mbara igwe. Gafe njikọ ma ọ bụ Tweet site na onye na-asọmpi abụghị azụmahịa na-adịghị mma, ọ na-egosi na ị na-echebara ndị na-ege gị ntị anya ma chọọ inye ha ozi kachasị mma enwere ike.
Influencer ga-enwerịrị aha. Ma ọ bụ ogo, akwụkwọ, blọọgụ ma ọ bụ aha ọrụ… onye na-emetụta ya ga-enwerịrị aha na-akwado ikike ha nwere maka isi okwu a.
Onye na-emetụta ya ga- tọghata ndị na-ege ha ntị. Inwe ọtụtụ ndị na-eso ụzọ, ọtụtụ retweets, na ọtụtụ amaokwu ka apụtaghị na enwere mmetụta. Mmetụta chọrọ mgbanwe. Ma ọ bụrụ na influencer nwere ike imetụta mkpebi mmadụ ịme n'ezie ịzụta, ha abụghị ndị nwere mmetụta.
Mmetụta anaghị eto oge, ọ na-agbanwe ka oge na-aga. A gbanwee mmetụta nwere ike ịbịa dị ka ị kpọtụrụ njikọ gị ma ọ bụ chegharịa site na mmetụta ọzọ. Naanị na mmadụ nwere ụmụazụ 100,000 otu afọ gara aga apụtaghị na ha ka na-emetụta taa. Chọta ndị na - eme ihe ike na - agba ọsọ dị ka a hụrụ site na uto na - aga n'ihu.
Enwere ndị ọzọ? N'ezie enwere. Anaghị m agbanye nke a dị ka iwu - mana achọrọ m na sistemụ na-egosipụta ma na-enwe mmetụta na ịntanetị ga-akwụsị ịdị umengwụ wee bido ịnye ụfọdụ nyocha ọkaibe karịa na njirimara nke mebere onye nwere mmetụta.
Tags: mmetụtakloutklout akaraMmetụta mmetụta
Echere m na post a bụ ntụpọ na. Ọtụtụ na - ejide onwe ha na ịgụ na ndị na - eso ụzọ na ha echefuru maka ezigbo ROI nke netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụrụ na gị na ndị na-ege gị ntị adịghị eso, ha agaghị enwe ike ige gị ntị. Ndị mmadụ nwere ike ige gị ntị n’ Onlinentanet ma ọ bụ ihu na ihu ma ọ bụrụ na ị naghị ewepụta oge iji na-ege ha ntị ma soro ha na-emekọ ihe.